Forum serasera malagasy Voavidin-dradomelina vola daoly hatr@ Prefet n ´Antananarivo - Dinika forum.serasera.org
Voavidin-dradomelina vola daoly hatr@ Prefet n ´Antananarivo
Fitohizan'ny hafatra : Voavidin-dradomelina vola daoly hatr@ Prefet n ´Antananarivo
tovorandria - 03/01/2019 05:51
Fa hono a, fa maninona no sakanana ireo olona izay maneho ny heviny sy te hampahafantatra ny vahoaka ny tena zava nisy nandritry iny fifidianana iny???
Tonga marobe teny ireo vahoana t@ sabotsy , nilamina tsara tsisy korontana d maninona no nosakanana omaly??
Ho an ´tafika malagasy manokana, natao hiaro ny vahoaka ianareo f´aza matim-bola sy vidian olona vola kely in1 mandeha, tadidio fa manan jina ireo vahoaka ireo k´aza ato tsinotsinona,
hery - 03/01/2019 18:09
Tsy maintsy ho izay foana ny resaka handeha eo.
Raha mamoaka vokatra izao ny HCC ka miteny hoe Rajoelina no lany dia tsy maintsy holazaina hoe voavidin'ny volan-dRajoelina haramin'ny HCC. Saropady be anefa ilay resaka satria aleon'ny HCC miaritra ny vavan-dRavalo sy ny mpanohana azy toa izay hiaritra ny vavan-dRajoelina sy ny mpanohana azy.
Ny vavan-dRavalo efa hita ihany amin'izao hoe tsy dia mankaiza loatra (resin'ny EMMOREG sns) ka fantatra hoe tsy ho lasa lavitra. Fa ny an-dRajoelina mbola tsy hitany ny tena heriny ka sao dia mitondra korontana be lavitra kokoa.
Tovorandria - 03/01/2019 22:15
Tena mampalahelo be ilay toe tsaina, dia hiara hijery isika fa vao may hiha hahantra lavitra noho izao ny gasy, efa io rajoelina io nanomboka ny nanonganany Fanjakana t@ 2009 no nampahantra ny malagasy ôtr zao, d mbola nalainy t@ halatra n1 izao ny fahefana, Andriamanitra tsy andrinao Radomelina andrin ny malagasy 25tapitrisa, betsaka ny olona no manao Andriamanitra ho tsy misy,
Tovorandria - 03/01/2019 22:20
Ay d hadinoko,hoy Hery hoe, ho hiteny ny HCC oe rajoelina no lany d lazain ny olona fa voavidim mbola ny hcc,eny tompoko, tsy hisy olona hanao fitsaran diso tss antony zany, ts maintsy ao fona raha, ny hcc ve ts ahazo ariary @ io d tsy handray sy hamakafaka ary hitsara @ tokony ho izy @ io fangalaram bato mihoam pampana??
Efa velom panantenana aho hoe ho avotra n1 ny gasy raha nilatsaka ravalo kanjo indro n1 le radomelina fa hanao mafia,sy handripaka ny ain ny gasy, ireo havana sy namana sy mpiray tanindrazana efa matin ny fahantrana no zimbazimbaina ny safidiny no mampalahelo
NytenakoIhany - 04/01/2019 05:16
Tsara raha mianatra zavatra tsara isika Malagasy fa potika tanteraka ny toen-tsaintsika, ary tsisy zavatra anjary ny hoavin'ny taranaka ra toy izao foana no fomba hitondrana ny firenena.
Nomen'Andriamanitra tany tsara sy mafinaritra, ary feno harena isika fa potik'ireo mpanao politika sy ny fitaovany dia isika vahoaka izany.
hasnfan - 04/01/2019 16:11
De tsy hay tsony zay ihafaran'ny firenentsika rzalah a!Ny tsapa aloha zao de mbola lalaovin'ny frantsay tanteraka ny fiainam-pirenentsika.